Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ Italy » Venice ugbu a na -ana ndị njem nleta ego mbata
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Venice kwụrụ ụgwọ mgbagharị na -eme nlọghachi
Ndị na -eme njem nlegharị anya Venice na -alaghachi maka ndị njem ịbanye n'obodo. Nlebara anya nke ndị njem, nke, n'agbanyeghị na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enweghị mmiri na -esi na mba ofesi, na -egosipụtakwa oge ọkọchị Venetian a.
Na -atụ anya nubata ndị njem na afọ na -abịa, Venice ga -eweghachite azụ azụ nke mere na ndị njem ga -akwụ ụgwọ iji banye n'obodo.
E gosipụtara ọnọdụ ntụgharị na 2018 mana ọ nweghị ihe ịga nke ọma na ndị bi na ha nọ n'ọgba aghara.
Ntughari ọhụrụ ga -enwe ndị na -agụ anya anya ebe ndị bi, ụmụ akwụkwọ, na ndị ọrụ ga -enwe igodo mebere na ekwentị ha maka ịnweta n'efu.
Mkpebi a hapụrụ na mbara ikuku ruo oge ụfọdụ ka a ga -amanye ijikwa ọnụọgụ ndị njem na -aga Venice.
Onye isi obodo Venice Luigi Brugnaro
Ugbua n'afọ ọzọ, na 2022, isi obodo Venetian ga-etinye n'okporo ụzọ ya usoro ntụgharị ihu nke nwere ndị na-agụ anya anya, nke ga-abụ teknụzụ dị elu karịa ka a na-anwale ọnụ ụzọ ime onwe ya na 2018, nke ọ bụ naanị ndị debere akwụkwọ nleta na ebe ma ọ bụ nọrọ. ụlọ obibi nwere ike ịbanye.
A ga -enwekwa ụgwọ nnweta nke euro 10 a ga -akwụ. Ndị bi, ndị njem, na ụdị ndị ọzọ ka a ga -atụpụ n'ego. Ebumnuche bụ izere njupụta nke ndị njem nke ahụ bụ ọbụna post COVID tụrụ anya ya.
Ọchịchị nke Venice Mayor Luigi Brugnaro na -edu, kwuru, "Anyị ga -ekpebi dabere na teknụzụ, [anyị] ga -ahọrọ ebe anyị ga -etinye ha," na June, ngosipụta mmasị na ịhọrọ ọnụ ụzọ kacha mma, enwere anọ ụlọ ọrụ dị njikere igosipụta ọrụ ha. ”
Nnwale mbụ ga -amalite na Septemba. A ga -eme ha n'àgwàetiti Tronchetto, ntọala nke isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii mpaghara yana ebe ụlọ njikwa smart na -ewere ọnọdụ.
Ndị bi, ndị ọrụ na ụmụ akwụkwọ na -aga obodo kwa ụbọchị ga -enwe ike ịbanye ekele igodo mebere na ekwentị ha. Ka ọ dị ugbu a, ndị njem ga -ebu ụzọ debe ebe ndị fọdụrụ, wee nyochaa ụdị tiketi iji banye n'otu n'ime ebe mbata a.
N'ọnwa June, onye minista ahụike Italiantali Roberto Speranza kwupụtara na Italy ga -ahapụ ndị America ịbanye na obodo n'okpuru otu ihe achọrọ dị ka akwụkwọ Green Green EU. Nke ahụ pụtara na ndị njem US nwere ike igosi ma ọ bụ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi, asambodo mgbake sitere na COVID-19, ma ọ bụ ule PCR na-adịghị mma ma ọ bụ ngwa ngwa-ewepụtara n'ime awa 48 nke mbata nwere ike ịga mba Mediterenian na-enweghị iche iche mgbe ị bịarutere.
Joann ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 24, 2021 na 06:34
OMG..Venice bụ n'ezie Disneyland ọhụrụ !!!